Danger zone: Happy Birthday သံလွင်အိပ်မက်
Happy Birthday သံလွင်အိပ်မက်
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ်(၁)ကို ၂၀၀၄ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ရက်နေ့မှာ စပြီးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ ၃နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ဒီ၃နှစ်အတွင်း အခက်အခဲတွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့သလို အဆင်မပြေတာတွေကိုလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို အောက်ပါလူတွေ မပါပဲ ကျွန်တော်၊ ညီညီ၊ နေမျိုး၊ ကိုငယ်တို့ လေးယောက်တည်းနဲ့ သံလွင်အိပ်မက်ဆိုတာ မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးစကား အရင်ပြောချင်ပါတယ်။
- စာမူများကို အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ ဆရာမင်းလူ၊ ဆရာမောင်သစ်ဆင်း၊ ဆရာဖေမြင့်နဲ့ ကာတွန်းတွေကို ကြိုက်တာသုံးဆိုပြီး ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်။
- စာမူလိုတယ်ဆို စာမူ၊ ဘာသာပြန်ဖို့လိုရင် ဘာသာပြန်၊ စာရိုက်စရာရှိရင်လည်း ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ခွန်မြလှိုင်။
- သံလွင်အိပ်မက်ကို စာမူတွေပို့ကြဖို့ ပလန်းနက်ထဲမှာရော တခြားနေရာတွေမှာပါ လိုက်ကြော်ငြာပေးတဲ့ ညီလင်းဆက်။
- ၀တ္ထုတွေပို့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ခရေဖြူ၊ ညီသစ်၊ နိုင်းနိုင်းစနေ၊ ဇွဲ၊ လင်းလက်ကြယ်စင်၊ မင်းနေမာန်ခ၊ မွန်းသက်ပန်၊ မအိမ်ချမ်းမြေ့။
- ဆောင်းပါးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြတဲ့ မဟနစံ၊ ချမ်းမြေ့သူ၊ စကားပန်း၊ မင်းသစ္စာ၊ မကေသွယ်။
- ကဗျာတွေပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေနဲ့ တခြားစာမူများကို ပေးပို့ခဲ့သူများ။
- သံလွင်အိပ်မက်အလှူလုပ်တိုင်း လိုက်ကူညီခဲ့သလို စာမူတွေလည်း ပေးခဲ့တဲ့ မိုးလှိုင်ည။
- ကာတွန်းတွေကို လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ဆွဲပေးခဲ့တဲ့ ခန့်ငြိမ်းသက်။
- အင်တာဗျူးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြေပေးခဲ့ကြသူများ။
- စာတွေကူရိုက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ နေနေနိုင်၊ ဒီမို၊ မချစ်လေပြေ Heaven CyberCafeက မိသားစုများ။
- နိုင်ငံတကာက သံလွင်အိပ်မက်အဖွဲ့ဝင်တွေ။
- အဝေးတစ်နေရာက အမြဲအားပေးနေကြတဲ့ အကို၊ အမများ။
- စကားဝိုင်းထဲမှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သူများ။
- ဝေဖန်အကြံပြု၊ အားပေးစာများ ပေးပို့ခဲ့သူများ။
- Websiteအတွက် ကျခံခဲ့ရသော ငွေကြေးများ။
- Issueတစ်ခု ထွက်ခါနီးတိုင်း အိပ်ပျက်ခဲ့သော ညများ။
- အခုဒီအထဲမှာ မပါပေမယ့် တခြားတခြားသော ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများနဲ့
- သံလွင်အိပ်မက် အမှတ်(၁)မှ အမှတ်(၁၁)ထိ အားပေးခဲ့တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အယ်ဒီတာအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားပြောချင်ပါတယ်။
သံလွင်အိပ်မက်ဟာ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာလူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ဝေမယ်လို့ မူချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ အညီ အဲဒီမူနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ စာမူများ၊ အရေးအသားအားနည်းတဲ့ စာမူများ၊ အကြောင်းအရာပိုင်း မပြည့်စုံတဲ့ စာမူများကို ပယ်ခဲ့ရတဲ့ အတွက်အလွန် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
သုံးနှစ်သား သံလွင်အိပ်မက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စာဖတ်သူတွေကို သုတ၊ ရသပေးနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အကျိုးပြုသော မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်သွားဖို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းရင်း သံလွင်မောင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းသို့ ပေးစာ(၅) မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာသားတစ်ချို့ကို ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
``တို့ဗမာလူငယ်တွေလည်း ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေစင်္ကြာဖြန့်နေလိုက်ကြတာ မြန်မာပြည်မှာ လူငယ်တွေ ကျန်မှ ကျန်သေးရဲ့လားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံတွေ များတော့ ကောင်းပါတယ်လေ။ ဒါမှ အနာဂတ် မြန်မာပြည် တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ၊ အမြင်သစ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်ဆန်းတွေကို ပြန်ပြီး သယ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်လား။ ဧပရယ်လ်ရယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်မဝေးတဲ့ အနာဂတ်မှာ ငါတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာပြည် တိုးတက်ကောင်းစားရေးအတွက် ငါတို့လူငယ်တွေ အားလုံးအတူတကွ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်ယူကြမယ်လို့ဖြင့် ငါတော့ ယုံကြည်မိတယ်။ `ဒါတို့ပြည်၊ ဒါတို့မြေ ဒို့ပိုင်တဲ့မြေ´လို့ ငါတော့ ခပ်တိုးတိုးလေး ညည်းရင်း ငါတို့လူငယ်တွေ အားလုံး ငါတို့မြေမှာ ပြန်ဆုံကြမယ့် နေ့ရက်တွေကို မျှော်လင့်မိတယ်။´´
သံလွင် အိပ်မက် အဓွန့်ရှည်ပါစေ
စာရေးသူနှင့် စာဖတ်သူများကြား က ခင်မင်မှုတွေ၊ ကြိုးစားမှုတွေရဲ့ ကောင်းချီးနဲ့အတူ သံလွင်အိပ်မက် သက်တော်ရာရှည်ပါစေ.. အဓွန့်ရှည်ပါစေ.. ရှေ့ဆက်မဲ့လမ်း ဒီထက် ဖြောင့်ဖြူးပါစေ..
Great appreciation to4Editors, persons who type for my stories and all readers.
Thanks for encouragement and confidence given by Ko sithu(Thanlwin) to start writing and to keep subsequent writing.
Thanks for discussion from Ko Ngal
Wish Mr. Sithu to get pretty, intelligent, educated, rich and lovely girl friend as fast as possible. :P (two and above)Happy?
ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးစွာနဲ့ ပီတိဖြာပြီး ပြန်သွားပါတယ်။
နေ့မအား၊ ညမအား စီစဉ်သူတွေရော၊ ရေးသူ၊ဆွဲသူ၊ ဖတ်သူ၊ ကြော်ငြာသူ အားလုံးအားလုံးကို
သံလွင် အဓွန့်ရှည်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်
Happy birthday Thanlwinainmat...
Thanlwinainmat...pls inform kozinkolat that I tagged him...
thank u Thanlwinainmat ....
ံHappy Birthday သံလွင်အိမ်မက်ရေ
ငွေရတု ရွှေရတု တိုင်ပါစေ
ကိုသံလွင်မောင်တို့ရေ...နောက်နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီတိုင် မွေးနေ့ပွဲတွေ ကျင်းပနိုင် ပါစေ . . .
Happy Birthday သံလွင်အိပ်မက်ရေ..
သံလွင်အိပ်မက် အဓွန့်ရှည်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်..
သံလွင်အိပ်မက်က အစ်ကိုများအား အစဉ်အားပေးလျှက်..
သံလွင်အိပ်မက် ရဲ့ အမာခံပရိသတ်ကြီး,
စထွက်တဲ့ အချိန်ကစလို့ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
ရတယ်လေ ငါက တစ်လုံးကို တစ်ပို့စ်နဲ့တင်မှာ
Happy Be lated Birthday "Thanlwinainmat"....
Happy Birthday Thanlwinainmat!!
သံလွင်အိပ်မက် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေသော်။ ဇင်ကိုကလဲ စာလေး တစ်ပုဒ် လောက် ရိုက်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထည့်ရေးထားတော့ ရှက်တောင်ရှက်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးနော်၊
အားပေးလျှက်ပါ ၃နှစ်သား သံလွင်အိပ်မက်ရေ
သ့လွင်အိပ်မက်ကို စဉ်ဆက်မပျက် အမြဲ မက်နိုင်ကြပါစေဗျာ
Happy Belated Birthday Thanlwin..,
Thant Ko said...
Happy Birthday TLAM!!!
ဟုတ်.... အခုလို သံလွင်အိပ်မက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲမှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ လူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း။
မဟာသီရိ သုဓမ္မ ရာဇာ
ကျွန်တော့်လို အဲဒီဘွဲ့၊ တံဆိပ်တွေ မမြင်ဖူးဘူးဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် မြန်မာစွယ်စုံကျမ်းကနေ Scanဖတ်ပြီး သတိုးသီရိ သုဓမ္မရာဇာ အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ အလင်္ကာကျေ...
မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅မျိုး ရဲ့ စာရင်း http://yawaitun.blogspot.sg/2012/04/blog-post_2864.html ဒီနေရာကနေ ကူးယူခဲ့ပါတယ်။ ကချင်တွင် လူမျိုးစု...
Heroes - Live in Singapore
အို . . .အိပ်မက်ရင်ကွဲ